Ciidamada Puntland iyo kuwa PSF-ta oo ishor fadhiya iyo dadka oo bilaabay iney qaxaan | Entertainment and News Site
Home » News » Ciidamada Puntland iyo kuwa PSF-ta oo ishor fadhiya iyo dadka oo bilaabay iney qaxaan
Ciidamada Puntland iyo kuwa PSF-ta oo ishor fadhiya iyo dadka oo bilaabay iney qaxaan
daajis.com:- Waxaa wali taagan oo aan xal laga gaarin khilaafka u dhexaya maamulka Puntland iyo Hoggaanka ciidanka PSF iyadoo magaalada Bosaaso laga dareemayo dhaqdhaqaayo ciidan.
Wararka ayaa sidookale sheegaya xaafadaha qaar laga qaxay cabsi laga qabo inuu dagaalka bilowdo aawadeed arrintaasi oo ay dowladdu ka digtay.
Ciidamo taabacsan dowladda oo maalmihii ugu dambeeyay ay kusoo daabuleysay Boosaaso ayaa dhufeyso qotay kuwaa oo sugaya amarka saciid deni si ay u weeraraan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee PSF-ta.
Arrintan ayaa imaneysa kaddib markii dhawaan uu madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku magacaabayay agaasimaha cusub ee hay’adda PSF balse hoggaanka hay’addaasi ayaa magacaabistaasi iyo xil ka qaadistii agaasimihii hay’addaasi ku tilmaamay sharcidarro.
Isimada Puntland oo khilaafkan ayaa ka hadlay ayaa dalbaday in wax walbo wadahadal lagu dhameeyo balse waxaa muuqata in Labada dhinac aysan warkaasi dhag jalaq usiinin.
Ciidamda PSF ayaa dhufeyso ka qotay meelaha ay kaga sugan yihiin Garoowe, Qardho iyo waliba Boosaaso iyagoo uga digay dowladda iney soo weerarto.
Saciid Deni ayaa la sheegay in ciidankan uu u adeegsan rabay arrimo siyaasadeed balse waxaa hor istaagay reer Diyaano oo ciidankan gacanta ku hayo.